Sekunomnqamulajuqu kwaMaqedipuleti – Ubukhosi
Home/ Ubukhosi noMhlaba/Sekunomnqamulajuqu kwaMaqedipuleti
SELUQALE phansi usizi lomphakathi waKwaMaqedipuleti eShowe obhekene nengwadla yokususwa ngenkani endaweni yawo ngoba osomabhizinsi abamhlophe okuthiwa bahlangene nosoplitiki abathile befuna ukwakha inxanxathela yezitolo.
Lokhu kulandela izincwadi ezinqumela lo mphakathi wakwaMaqedipuleti ugwayi katiki ukuba kuthi kushaya umhla zili-18 kuMasingana 2016 ube usungasekho endaweni noma ubhekane nokususwa ngendlakadla. Lesi sinyathelo sikaMasipala uMlalazi sokuqhubeka nokususa ngenkani lo mkhaphakathi ontulayo endaweni yokhokho bawo senzeka noma sekungenelele iHhovisi le-Ingonyama Trust Board (ITB) ecele ukuba kuxoxwe ngobunikazi bale ndawo. IHhovisi le-ITB likholelwa wukuthi le ndawo ingeyeNgonyama njengoba isesabelweni esibuswa yinkosi yamakholwa, uThemba Zulu.
Ngakolunye uhlangothi izikhulu zikaMasipala uMlalazi nazo zithi le ndawo ngekaMasipala. Ukushuba kwesimo ngale ndawo sekuholele ekutheni kufakwane kubameli.
Esinye isikhulu esiphezulu se-ITB, kodwa esingathandanga kudalulwe igama laso sithe bazolwa kuze kuguge iphakethe ngale ndawo.
“Kuyaxaka lokhu okwenziwa nguMasipala ukuqhubeka nezinhlelo zokususa lo mphakathi ekubeni kusenezingxoxo eziqhubekayo phakathi kwabameli bethu nabakaMasipala ngobunikazi bale ndawo,’’ kusho lesi sikhulu.
Lesi sikhulu siqhube sathi ngemuva kokubona le ncwadi ezinqumela umphakathi wakwaMaqedipuleti ugwayi katiki ukuba uphume endaweni ungakashayi umhla zili-18 nokuthi uMasipala uyaqhubeka nezinhlelo zokuwususa nabo lolu daba sebelwedlulisele kummeli weHhovisi le-ITB.
“Sizoya enkantolo ukuyophikisa lesi sinyathelo sikaMasipala uMlalazi sokususa lo mphakathi. Ekuqaleni izikhulu zikaMasipala zathi uMasipala awusahlangene nale ndawo ngoba sewayidayisela abanikazi benkampani iMcCormick Property Development abangamadeveloper kodwa futhi nguMasipala obhalela abahlali izincwadi zokubasusa,’’ kusho lesi sikhulu se-ITB.
Lesi sikhulu se-ITB siqhuba sithi: “Lokhu kwenza uzibuze ukuthi yini lena esishisa lezi zikhulu zikaMasipala njengoba seziphuthuma ukususa abantu ekubeni kusaxoxwa. Okukanye kungenzaka ukuthi kukhona abadlile ngokwakhiwa kwale nxanxathela yezitolo ehlongozwayo,’’
UMnu uThobani Msimang okhulumela inkampani i-Amber Dawn ukuqinisekisile ukuthi uzosuswa ngendlakadla umphakathi wakwaMaqedipuleti.
“Sesibekezele kakhulu isisombululo singaveli njengoba sekuphele izinyanga ezili-18 kukhulunywa into eyodwa. Ngeke sisalinda, umsebenzi wokwakha le nxanxathela yezitolo uyaqala ngomhla zili-18 kuMasingana.’’ kusho uMnu uMsimang.
UMsimang uthe yize bezwelana nomphakathi wakwaMaqedipuleti akukho abangakwenza kumele baphume endaweni yabo.
“Sesilahlekelwe ngamakilayenti amaningi ngokubambezeleka kwalolo hlelo osekuphele izinyanga ezili-18 manje lungaqalwa. Kunekilayenti yethu enkulu kabi nayo esisabise ngokuhoxa uma kungukuthi lo msebenzi awuqali ngomhla zili-18 kuMasingana.’’ kusho uMnu uMsimang.
UMnu uMsimang uthi uma i-ITB inenkinga ngalo mhlaba kuzomele ikhulume noMasipala uMlalazi okuyiwo obadayisele indawo.
“Akungabanjezelwa uhlelo lwethu ngento engekho. Kade sibancenga laba bantu ukuba baphume endaweni yethu.’’ kuqhuba uMnu uMsimang.
UMnu uMsimang uthi okukuqala umphakathi wavuma ukusuka waze wakhelwa nezindlu zomxhaso.
“Munye umndeni ogolozayo ukusuka lowo ngumndeni wakwaManamela oholwa nguBongi Molife. Kade sasizama ukuxoxisana noBongi uqinisa ikhanda.’’ kuqhuba uMnu uMsimang.
UMnu uMolife uthi bayosuka beyizidumbu endaweni kababamkhulu wakhe. “Laba bantu basibukela phansi ngoba singabantu abamnyama. Bathi bazosinxephezela ngendlu yomxhaso, okuyinhlamba ngoba ukube besingabelinye ibala ngabe sinxeshezelwa ngemali ebhekile.’’ kusho uMnu uMolife.
Inkampani u-Amber Dawn izokwakha inxanxathela yezitolo nokuwuhlelo olizodla uMasipala imali elinganiselwa ezigidini ezili-R167.
Kunombango oshisa phansi phakathi kukaMasipala namalungu omphakathi okungumndeni wakwaManamela nomndeni wakwaZungu abathi lena yindawo yawo ngakho akukho zitolo ezizokwakhiwa kungaxoxiswananga nawo. Lo mndeni wakwaManamela nowakwaZungu ozalanayo uphinde wathi ngeke usuke endaweni yabo.
Ngakolunye uhlangothi imeya yalo Masipala, uMnu uJeke Zulu ngesikhathi ephekwa ngemibuzo yiphephandaba iBAYEDE ngobunikazi bale ndawo indawo yakwaMaqedipuleti ingekaMasipala. Nokuthi uMasipala unetayitela layo owalithola ngokudayiselwa nguMnyango Wezemihlaba eMgungundlovu.
UMasipala uMlalazi le ndawo usuyidayisele iDeveloper, uMnu u-Ed Peen ongumnikazi wenkampani i-Amber Dawn Property Development okuyinkampani ezokwakha le nxanxathela yezitolo.
UMnu uZulu uthe izingxoxo ngokudayiselana uMasipala wazenza noMnu Peen ehlangene nomlimi wendawo omhlophe uMnu uGuy Channells odume ngelikaMshinela.
Ebuzwa uMnu uPeen mayelana nemininingwane yokudayiselana wale waphetha ukudalula ngoba ethi inkampani yakhe ayisahlangene nokwakhiwa kwale nxanxathela yezitolo zaseShowe ngoba wonke umsebenzi usewudayisele enye inkampani ebizwa ngoMcCormick Property Development (MPD).
Okhulumela i-ITB, uMahluleli, uJerome Ngwenya ukhuze ibhadi wathi beyi ITB bayakweshwama ukuthi uMasipala waseMlalazi udayise ngendawo yeNgonyama ingazi ukuze kwakhiwe inxanxathela yezitolo.
“Ngokwazi kwethu le ndawo okukhulunywa ngayo ingaphansi kweNgonyama. Ngakho asazi lutho ngokudayiswa kwawo. Ukudayiswa kwawo akukho emthethweni ngoba kuyaziwa ukuthi awudayisi umhlaba weNgonyama kodwa uyaqashiswa,’’ kusho uMahluleli uNgwenya.
UMahluleli uNgqwenya wethembise ukulusukumela lolu daba lwakwaMaqedipuleti.
“Okwesibili asazi ukuthi uMnyango Wezemihlaba ungenangaphi ekudayisweni komhlaba.’’ kuqhuba uMahluleli uNgwenya.
UMahluleli uNgqwenya uphinde wakuveza ukuthi ngaphambilini yake yabakhona imizamo yezikhulu zikaMasipala uMlalazi wokudayisa umhlaba weNgonyama ngomkhonyovu kodwa bavinjwa yi-ITB.
“Besingazi-ke ukuthi sebebuye baqhubeka nalo mkhuba wabo.’’ kuqhuba uMahluleli uNgwenya.
UMahluleli uNgwenya uqhube wathi: “Lo mhlaba okukhulunywa ngawo ungoweNgonyama, ngisho nekolishi lezemfundo leli manje eselibizwa nge-Umfolozi College lakhiwe emhlabeni weNgonyama.’’
Nenkosi yendawo uThemba Zulu ukuqinisekisile ukuthi lo mhlaba obangwayo ungaphansi kweNgonyama kanjalo nokwabiwa kwawo kulandelwa inqubo yoBukhosi.
Imeya uZulu yona ithi uMasipala unetayitela lale ndawo owalidayiselwa nguMnyango Wezemihlaba uMasipala usaphethwe yi-IFP.
Okudidayo ngalo mhlaba wakwaMaqedipuleti ukuthi intengo yawo isinciphile njengoba ngowezi-2011 kuya kowezi-2015 le ndawo ibibiza izigidi ezili-R12 kodwa manje ngowezi-2015 kuya kowezi-2019 intengo yayo isiyizigidi eyizi-R5,702.
Ngokophenyo lweBAYEDE umuntu owafaka isikhangiso ngokudayiswa kwale ndawo nguMnu uR.R. Pillay oyisikhulu eMnyangweni Wezokuhlaliswa KwaBantu zili-17 kuNdasa 2006.
Umphathi wenkampani uMcCormick, uMnu Jayson McCormick uvumile ukuthi sekuyibo abazokwakha le nxanxathela yezitolo ngemuva kokudayselwa yinkampani enguzakwabo i-Amber Dawn.
UMnu McCormick wesabise ngokuthathela labo abenqaba ukusuka endaweni yabo izinyathelo zomthetho.
“Siyazi ngomndeni othile ongafuni ukusuka endaweni yethu. Sisazokhuluma kahle nawo ngaphambi kokuwuthathela izinyathelo zomthetho ngoba bonke abantu abasahlezi laphaya bahlezi ngokungemthetho.’’ kusho uMnu uMcCormick.
Odabeni lokhuthi umhlaba ungaphansi kweNgonyama, uMnu uMcCormick uthe ngumbhedo lowo.
UMnu uMolife ungumzukulu kaNkkz Ellen Manamela ongumnikazi wendawo. Kanti uDkt uNkunzi Zungu uyindodana ka-Andrias Nqe Zungu naye ongumnikazi wengxenye yendawo okuthiwa izokwakhiwa le nxanxathela yezitolo. UMnu uNqe Zungu bayelamana noNkk Manamela.
UMnu uMolife noDkt uNkunzi Zungu babikele iBAYEDE ukuthi selokhu bephumele obala ngokuthi akukho zitolo ezizokwakhiwa endaweni yabo abasabulali ubuthongo ngenxa yezinsongo zokusocongwa.
UMnu uNgema uthi naye le ndoda isike yahlangana naye icela ayikhombise emzini wakwaManamela.
UMnu uMolife uthe vele uyazi ukuthi uzobulawelwa umhlaba wakubo.’’ Bathi yimi engiqinisa ikhanda. Namanje ngikulindele ukufa.’’ kusaqhuba yena.
NoDkt uZungu naye uthi akasalubhadi ekhaya lakubo eShowe ngoba esabela impilo yakhe.
Elinye ikhansela kodwa elingathangana kudalulwe igama lalo ngoba lingagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba lithe umhlaba wakwaMaqedipuleti kuze kuyoshaya kwaMtakwende yindawo kaMasipala.
UDkt uZungu uthi umndeni wakubo uneminyaka engaphezulu kwama-70 uhlala kule ndawo njengoba ubaba wakhe uMnu uNqe Zungu wayenethilomu kusukela ngeminyaka yawo-1940. Engxenyeni yale ndawo yakwaZungu sekwakhiwe igaraji likaphethiloli elibizwa ngeKwasiza Petrol Service Station. Nalo leli garaji bathi lakhiwa kungabonisanwanga nomndeni wakwaZungu, nowakwaManamela.
“Leli garaji lakwaSiza lakhiwa kungaboniswananga nathi banikazi bendawo kodwa kwakungekho esasingakwenza ngenxa yesimo sezepolitiki yangaleso sikhathi.” kusho uDkt uZungu.
Ngokusho kukaMnu uMolife oyisishoshovu se-African National Congress (ANC) uthi izinkinga ngale ndawo kagogo wakhe ziqale ukuqina ngowezi-2010 uMasipala usuphethwe yi-ANC ngokubambisana ne-NFP.
Ummeli we-ITB, uMnu uCollen Mnguni ukuqinisekisile ukuthi sebewubhalele uMasipala waseMlalazi ukuba ulumise uhlelo lwawo lokususa abantu kuze kube kulungiswa udaba lobunikazi bomhlaba.
“Kwasekuqaleni kwakungekho emthethweni ukuthi uMasipala udayise ngomhlaba weNgonyama. Kumanje sisemalungiselelweni okufaka amaphepha enkantolo okuba wonke lo mhlaba ubuyiselwe ngaphansi kweNgonyama Trust Board,’’ kusho uMmeli uMnguni. “Uma le nkampani eyideveloper ifuna ukususa abantu kuzomele iqale iyothola incwadi yenkantolo yokubasusa.’’ kuphetha uMmeli uMnguni.